N'ogbe omenala okomoko ọhụrụ imewe hourglass reed diffuser home frangrance diffuser - China N'ogbe omenala okomoko ọhụrụ imewe hourglass reed diffuser home francrance diffuser supplier, Factory –Opụrụiche Kere & Nrụpụta Co., Ltd
Mbido » Product » Esi ísì ụtọ » Reed mgbasa
N'ogbe omenala okomoko ọhụrụ imewe hourglass reed diffuser home francrance diffuser
• Ụdị: Fresheners ikuku, ikuku ikuku, ịchọ ụlọ mma
• Onye na -azụ ahịa: Ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Nrụpụta ihe oriri na ihe ọverageụverageụ, Ịzụ ahịa TV, Ahịa Super, Hotels.
• Oge: Onyinye, Onyinye Azụmaahịa, Njem, Onyinye, Agbamakwụkwọ
• ezumike: Ụbọchị Valentine, Ụbọchị Nne, Nwa ọhụrụ, Ụbọchị Nna, ezumike Eid, Afọ Ọhụrụ nke China, Oktoberfest, ekeresimesi, Afọ Ọhụrụ, Ista, Ekele, Halloween
• Oge: Kwa ụbọchị
• Oghere ime ụlọ: kichin, ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ, ime ụlọ iri nri, ụlọ ezumike, ụzọ mbata
• Akara: Logo nkeonwe ahaziri iche
• Aha ngwaahịa: Reed Diffuser
• Ngwa: Ụlọ Ọfịs Ime Ụlọ Ime Ụlọ
Ọhụrụ bịarutere Ejiji Reed Diffuser Igbe nkwakọ ngwaahịa N'ogbe Glass Reed Diffuser karama
Kedu ka m ga -esi họrọ isi?
Anyị na ụfọdụ ndị na -esi mmanụ na -arụ ọrụ n'ụwa rụkọrọ ọrụ iji mepụta ahịrị na -esi ísì ụtọ. Isi ọ bụla na -egosipụta ụdị mmadụ, nke ị ga -ahụ na nkọwa ngwaahịa yana ndetu nkọwa. Were ajụjụ anyị ka ịchọta isi gị zuru oke!
Mgbasa ozi ọ dị mfe ijikọ na ịkwakọba?
Ee na ee, anyị kwere nkwa. Enwere ntuziaka gụnyere n'ime igbe ahụ, ị ​​nwere ike ịlele nkuzi ngwa ngwa ebe a.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịgbanye diffuser m Hourglass m?
Ọ dabere na ụdị isi ị chọrọ! Maka ime ụlọ 200 square ukwu ma ọ bụ obere, otu ugboro n'ụbọchị dị mma. Dị ka ịdị jụụ na ịma mma dị ka mmanụ dị na enyo elekere bụ ilele, anyị anaghị akwado ịtụgharị ihe karịrị ugboro abụọ n'ụbọchị.
Ogologo oge ole ka ọ na-adị?
Ọ bụrụ na ị tụgharịa otu ugboro n'ụbọchị, isi a kwesịrị ịdị ihe dị ka ọnwa isii. A na -ejikwa otu ísì ọma emegharị ihe ahụ.
Ọ ga -ejupụta n'ụlọ m?
Emebere ya iji weta isi na -esi isi na mpaghara ma ọ bụ ime ụlọ nke ụlọ gị. Anyị na -aga karịa maka mmerụ ahụ dị nro ebe a. Nọgidenụ na -atụgharị ya otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị, a ga -eji nwayọọ nwayọọ na -esi ísì ọma ya, ọtụtụ mgbe.
Ị na -ere mmeju?
Ee! Ị nwere ike ịtụ nke gị ebe a.
Enwere m ike ịnwale nlele?
Anyị enweghị ihe nlele ugbu a n'ihi na ọ na -esiri ike ijide ahụmịhe Hyascent n'ụdị pere mpe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ Hyascent n'onwe gị tupu ịzụrụ, anyị nwere ndị na -ere ahịa na mba ahụ ma na -agbakwụnye mgbe niile. Chọta onye na -ere ahịa Hyascent enyere gị nso.
Gịnị bụ iwu nloghachi?
Anyị na -atụ anya na ị hụrụ diffuser elekere elekere gị n'anya, mana ghọta nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi diffuser maka ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ isi na -anaghị emere gị ya, anyị nwekwara usoro mgbanwe mmesapụ aka (enweghị nrụgide). Hụ nloghachi anyị na amụma mgbanwe maka ntuziaka.
Enwere m ike iji mmanụ mgbapụta ọzọ?
A na -ahazi ihe na -esi ísì ụtọ nke Hyascent ka ọ nwee ọfụma na -agbanwe agbanwe, saturation na viscosity na onye na -agbasa ihe aka anyị. Anyị anaghị akwado iji mmanụ ndị ọzọ, n'ihi na ha nwere ike bute ihifu ma mebie osisi ahụ.
Kedu ụdị mmanụ dị na diffuser?
Mmanụ anyị na -esi n'ụlọ na -esi ísì ọma zuru ụwa ọnụ, na -esi ísì ụtọ ọ bụla na -ewere àgwà pụrụ iche.
Mmanụ ahụ ọ bụ eke?
O di nwute, ọ nweghị ụzọ okike niile iji mepụta isi siri ike; ụmụ irighiri ihe ndị ị na -ahụ na akụrụngwa dị ngwa ngwa, a ga -ejikọkwa ha iji nweta mmetụta na -adịgide adịgide. Agbanyeghị, usoro anyị mere ihe karịrị afọ atọ nyocha na mmepe iji mezuo ụkpụrụ ahụike na nchekwa California kachasị elu. Anyị agaghị eresị gị ya ma ọ bụrụ na ahụ adịghị anyị mma ịnwe ya n'ụlọ anyị!
Enwere mkpachapụ anya ọ bụla m kwesịrị iji ngwaahịa m
Ị kwesịrị ịgbaso ụfọdụ usoro nchekwa nke ị ga -eji mmiri ọ bụla nwere kemịkal na -ebughị n'obi ị drinkingụ. Hyascent nwere ike bute mmeghachi ahụ nfụkasị ma nwee ike bụrụ ihe na -emerụ ahụ ma ọ bụ na -egbu egbu ma ọ bụrụ na eloda ya, yabụ dobe ya ebe ụmụaka na anụ ụlọ na -agaghị eru. Zere ịkpọtụrụ anya, akpụkpọ na ntutu. Zere ịkpọtụrụ arịa ụlọ, akwa na ebe a rụchara, n'ihi na mmiri nwere ike ịpụta. A na -atụ aro ihu elu ma ọ bụ ihe mgbochi, n'ihi na mfufu nwere ike bute ntụpọ na/ma ọ bụ mebie arịa ụlọ ma ọ bụ ihe ụlọ ndị ọzọ.
Ị na -ebufe mba ofesi?
Ee! Fọrọ nke nta ebe ọ bụla.
Enwere m ike itinye ozi onyinye?
O doro anya na ị nwere ike! Naanị pịa nhọrọ onyinye na ndenye ọpụpụ. Anyị ga -ahụkwa na egosighi ego a na mpempe akwụkwọ.
Ọkụ na -enwu enwu. Ụzọ azụ. Ị na -enwe mmetụta ịnọ n'ụlọ ebe ọ bụla ị na -aga.
Ihe edeturu na -esi ísì: Bergamot, Akpụkpọ anụ Suede, Elemi, ose ose, Akwụkwọ ụtaba
Echiche: Ma ị na -agbapụ n'obodo ma ọ bụ na -arọ nrọ obodo, isi a na -awagharị n'ime karama. Zụrụ otu maka ụlọ gị yana otu maka ebe nzuzo gị.
Na -akwụsị: 4 - 6 Ọnwa ole na
Plastic ụgbọ ala diffuser na Clip
Dara oké ọnụ Efere esi ísì ụtọ Soy kandụl
Home Glasschọ Mma Glass Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Diffuser